Tontolon’ny Rap gasy: hiverina indray i Noum’s Montana | NewsMada
Efa ao anaty ilay zavakanto ka tsy azo ampanginina na totorana. Anisan’ny miaina izany ihany koa i Noum’s Montana. Ho azy, mbola maro ny tanjona manoloana ny tontolon’ny rap gasy …
Nomena Nantenaina Andriamaromanebo na i Noum’s Montana, no tena ahafantaran’ny maro azy eo amin’ny tontolon’ny mozika. Tao Antsirabe, tanàna nahalehibe azy rahateo no nitsirian’ny talentany voalohany ka nirosoany teo amin’ny tontolon’ny rap. Ankehitriny efa eto Antananarivo izy. Ny vondrona ”zaza mainty” tao Antsirabe no nisy azy tamin’ny voalohany fa rehefa niakatra taty Antananarivo, nisafidy ny andeha irery ny lehilahy.
“Rehefa somary tsy henoheno kely teo dia hiverina indray satria somary sahirana tamin’ny fianarana teny amin’ny Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo aho. Ny tena tanjona amin’ny ilay fanaovana mozika rap, ny hanabeazana sy hampitana fomba fijery manokana amin’ny lafim-piainana maro samihafa. Izany hoe, amin’ny alalan’ ilay zavakanto ataoko no ampitako hevitra”, hoy i Noum’s Montana.
Miezaka mampivelatra sy mampahafantatra ny talentany
Anisan’ny hira nahafantarana an’i Noum’s Montana ny ”Raha Mozika” niarahana tamin’i Ndoas, izay manazava sy mamaritra ny mozika ataony amin’ny ankapobeny. Teo ihany koa ny hira ”Ny kolontsaiko” niarahana tamin-dry Doublenn, Psykopasy, Buddha El Taga”, izay manazava sy mamaritra ny fandraisany ny tontolon’ny zavakanto na ny kolontsaina Hip Hop. Mbola rakikira « audio » daholo hatreto fa tsy mbola misy rindrantsary.
“Ankehitriny, tena miroborobo fatratra sy mivelatra hatrany ny mozika rap. Fa olana ny eo amin’ny resaka haino aman-jery amin’ny fandefasana ny sanganasa. Soa ihany fa nisy ny “facebook” sy ny karazan-tambajotran-tserasera izarana ny mozika”, araka ny nambarany.